ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်မှုရှိသောအီးမေးလ် Opt-In မဟာဗျူဟာ Martech Zone
ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အကောင်းဆုံးအီးမေးလ် Opt-in နည်းဗျူဟာ
တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 21, 2016 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 22, 2016 Douglas Karr
My စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Podcast တခုကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Erin Sparks ကကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားအခက်တွေ့စေလိုသည် Martech Zone။ ကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ပြီး၊ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာကိုမပြောခင်အီးမေးလ်ရဲ့အရေးကြီးပုံကိုရှင်းပြသင့်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းထုတ်ဝြေခင်းကိုစက်တစ်ခုအနေဖြင့်ကြည့်နေပါကအီးမေးလ်လိပ်စာများကိုဖမ်းယူနိုင်သည် အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း သင့် site သို့သက်ဆိုင်ရာ visitors ည့်သည်များပြန်လာခြင်း
တကယ်တော့၊ သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာစာရင်းဟာသင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအကျဆုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးမဟာဗျူဟာဖြစ်တယ်လို့ငါပြောနိုင်သလောက်သွားမယ်။ ငါတို့တည်ဆောက်ခဲ့တာဒါကြောင့်ပဲ WordPress အတွက်အီးမေးလ်ဝန်ဆောင်မှု။ သင်၏ site ပေါ်တွင်ကြီးထွားလာစာရင်းသွင်းသူအခြေစိုက်စခန်းသည် အကောင်းဆုံးမက်ထရစ် သင်၏အကြောင်းအရာ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။aည့်သည်ကသင်၏စာပုံး (ပြည့်နေပြီးဖြစ်လိမ့်မည်) သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးကြိုဆိုသောအခါသင်၏အဖွဲ့အစည်းကပေးသောတန်ဖိုးကိုသူတို့ယုံကြည်သည်ဟုဆိုလိုသည်။
Welcome Mat ကိုမိတ်ဆက်
ကျနော်တို့ကြိုးစားရန်ကွဲပြားခြားနားသော tools များတစ်တန်စမ်းသပ်ပြီးပါပြီ ကျွန်ုပ်တို့၏ visitors ည့်သည်များ၏အီးမေးလ်လိပ်စာများကိုသိမ်းဆည်းပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာအတွက် - ဒါပေမယ့်ယနေ့အထိတစ် ဦး တည်းသာကောင်းမွန်စွာဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါတို့သုံးတဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ဒီနေရာမှာရှိပြီးသားအီးမေးလ်လိပ်စာတွေအများကြီးရတယ်။ ထို့အပြင် visitors ည့်သည်များအားချွေတာခြင်းနှင့်အခမဲ့ပေးကမ်းခြင်းများကဲ့သို့စာရင်းသွင်းရန်ဆွဲဆောင်သည့်အစီအစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရိုးသားစွာရှောင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသည့်တန်ဖိုးကိုအသိအမှတ်ပြုသောကြောင့်စာရင်းပေးသွင်းထားသောစစ်မှန်သောစာရင်းပေးသွင်းသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းလွှာသည်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများအားသုတေသနရလဒ်များရှာဖွေရန်နှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းပညာကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရလဒ်တိုးတက်စေရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများကိုအမြဲပေးသည်။
A ကြိုဆိုပါတယ်ဖျာ visitors ည့်သည်အသစ်များအတွက်ပေါ်လာသည့်စာမျက်နှာအပြည့်အဝတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထိုစာမျက်နှာကိုစာမျက်နှာကိုနှိမ့် ချ၍ visit ည့်သည်ကိုစာရင်းသွင်းခိုင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်ဤကဲ့သို့သောပုံရသည်
အလုပ်မလုပ်ပါဘူး၊ အံ့သြလောက်အောင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ် အခြားနည်းဗျူဟာများကတစ်လလျှင်သုံးစွဲသူတစ်ဒါဇင်ခန့်ကိုရရှိစေနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ Welcome Mat သည်အသုံးပြုသူတစ်ဒါဇင်ခန့်ကိုရရှိစေသည် နေ့တိုင်း။ တကယ်တော့တစ်နေ့မှာစာရင်းသွင်းသူ ၁၀၀ ကျော်ရှိမယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Welcome Mat သည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခြားနည်းဗျူဟာများထက်အဆ ၁၀၀ ကျော်ပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲနေသည်။
စာဖတ်ခြင်းကိုစတင်ပြီးနောက်လူကိုပြတ်တောက်စေသည့် popup နှင့်မတူဘဲဤနည်းလမ်းသည်၎င်းတို့ကိုစတင်မစတင်မှီစာရင်းသွင်းရန်တောင်းဆိုသည်။ အကယ်၍ သူတို့ကဆန္ဒမရှိရင်၊ သူတို့က“ မဟုတ်ဘူး” လို့ပြောရုံပဲ၊ ပလက်ဖောင်းကကျွန်ုပ်တို့အား opt-in ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြရန်နှောင့်နှေးရန်အခွင့်အလမ်းကိုလည်းပေးသည်။ ပြီးတော့တစ်ခုကတစ်ခုကတစ်ခုထက်တစ်ခုပိုကောင်းမလားဆိုတာသိအောင်အဆင့်မြှင့်တဲ့ toolset နဲ့ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကိုစမ်းလို့ရတယ်။
အဆိုပါ ကြိုဆိုပါတယ် သင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုကြီးထွားစေရန်အတွက်အသုံးဝင်သောနှင့်ထိရောက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ SumoMe ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း ၂၀၀,၀၀၀ ကျော်ပေါ်တွင် traffic tools များကိုယခု install လုပ်ပြီးပြီဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့ - ပလက်ဖောင်းသည်စကားပြောဆိုမှုများကိုမောင်းနှင်ရန်နှင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသောကိရိယာတစ်ဒါဇင်ကျော်ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် WordPress ဆိုဒ်ကိုဖွင့်ထားပါကသင်အလွယ်တကူစတင်နိုင်ရန်အတွက် WordPress Plugin ကိုလည်း SumoMe ကကမ်းလှမ်းသည်။ SumoMe တွင်လည်း Chrome plugin တစ်ခုရှိပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့၏ tool ကိုအလွယ်တကူခလုတ်နှိပ်ရုံဖြင့်ရနိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ သူတို့ဟာအမြဲတမ်းအီးမေးလ်စာရင်းကိုတိုးပွားစေဖို့၊ လူမှုရေးဝေငှဖို့အားပေးဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုင်းတာဖို့နည်းလမ်းသစ်တွေကိုအမြဲထည့်ပေးနေတယ် analytics tools တွေ။
သင်စတင်ရန် SumoMe နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပူးပေါင်းပြီး - tool တစ်ဒါဇင်ကိုရယူရန်ယခုပင်စာရင်းသွင်းပါ မကုန်ကျဘူး!
22:2016 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 15
ကောင်းတဲ့အလုပ် ဒေါက်။ တွစ်တာပေါ်ရှိ လင့်ခ်ကို နှိပ်လိုက်သည်နှင့် သင်ရေးသားခဲ့သည့် အလွန်ကြိုဆိုသော ဖျာတစ်ချပ်မှ ကြိုဆိုခံရသည်မှာ သေချာပါသည်။ ကျွန်တော်မြင်နေရသည့် အကြောင်းအရာ၏လမ်းကြောင်းကို မရောက်နိုင်သော်လည်း အလွန်မြင်နေရဆဲဖြစ်သည်။
ငါ့အီးမေးလ်လိပ်စာကို တကယ်မထည့်ထားပေမယ့် နောက်တစ်ခါ မင်းငါ့ကို လာပေးလိမ့်မယ် 😉
22:2016 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 39
အသုံးပြုသူသည် ဝဘ်ဆိုက်မှ ထွက်ခွာသွားသည့်အခါတွင် ပေါ်လာသည့် ခဲဖမ်းမျက်နှာပြင်ကို A/B စမ်းသပ်ပြီးပြီလား။ (ဥပမာ “Welcome Mat” ကဲ့သို့ မျက်နှာပြင်အပြည့်သည် “Bye-bye Mat” ဖြစ်လာမည် 😉 )
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် ပို့စ်တစ်ခုဖတ်ရန် သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းတို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာကို ချက်ချင်းပေးခြင်းဖြင့် ထိုပို့စ်ကိုဖတ်ရန်အခွင့်အရေးကို “ဆုံးရှုံး” ရန် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်မတွေ့မိသောကြောင့်ဖြစ်သည် (အခြားသူထံသို့ ပြန်ညွှန်းခံရနိုင်ချေရှိသည်။ စာမျက်နှာ) ပို့စ်ကို ဦးစွာမဖတ်ဘဲ ၎င်း၏ အီးမေးလ်လိပ်စာကို ချန်ထားခဲ့ရန် ၎င်း၏ အရည်အသွေးသည် အမှန်တကယ် တန်ဖိုးရှိမရှိ သိရန်...
အကယ်၍ သင်သည် ထို A/B စာမေးပွဲကို ယခင်က ပြုလုပ်ခဲ့ပါက၊ သင့်အကြောင်းအရာကို ဖတ်ပြီးသည်ထက် သင့်အကြောင်းအရာကို မဖတ်မီ လူများက ၎င်းတို့၏ အီးမေးလ်လိပ်စာကို ချန်ထားခဲ့ရန် ပိုမိုဆန္ဒရှိနိုင်သည်ကို သင်မည်သို့ ရှင်းပြမည်နည်း။
22:2016 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 4, 39 တွင်
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် Toni ကျွန်တော်သည် ဝဘ်ဒီဇိုင်းကို မည်သို့မျှ မကျွမ်းကျင်ပါ။ သူတို့ဆိုဒ်ကထွက်သွားရင် အဲဒါကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မလဲ။ “x” ကို နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ ပေါ်လာတဲ့ ပေါ်လာတာတစ်ခုနဲ့ ?
23:2016 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 45 တွင်
ဟေး ဒင်း၊ သုံးတဲ့ နည်းဗျူဟာလို့ ခေါ်တယ်။ ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက်မောက်စ်ညွှန်ပြသည့်အမြန်နှုန်းနှင့် ဦးတည်ရာကို စောင့်ကြည့်သည့် အခြေခံအားဖြင့် script ဖြစ်သည်။ လူသည် လိပ်စာဘား သို့မဟုတ် နောက်ကျောခလုတ်ဆီသို့ မောက်စ်ကို တွန်းလိုက်သည့်အခါ ပေါ့ပ်အပ်ကို ထုတ်ပေးသည်။